Pakistan Airlines inomisa ndege dzeKabul mushure mekunge maTaliban akaraira kudzikiswa kwemitengo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Afghanistan Kuputsa Nhau » Pakistan Airlines inomisa ndege dzeKabul mushure mekunge maTaliban akaraira kudzikiswa kwemitengo
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Pakistan Breaking News • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Pakistan Airlines inomisa ndege dzeKabul mushure mekunge maTaliban arayira kudzikiswa kwemitengo.
Nendege zhinji dzenyika dzisiri kubhururuka kuenda kuAfghanistan, matikiti eendege kuenda kuguta guru rePakistan, Islamabad, anga achitengesa nemari inosvika madhora zviuru zviviri nemazana mashanu paPIA, sekureva kwevashanyi vekuKabul, zvichienzaniswa ne $ 2,500- $ 120 zvisati zvaitika.
Taliban hurumende yakaraira Pakistan International Airlines (PIA) kudzikisa mitengo yayo yetiketi yemhepo.
Pakistan International Airlines (PIA) ndiyo yega inotakura nyika inobhururuka nguva zhinji kubva kuguta guru reAfghanistan.
Iyo nzira icharamba yakamira kusvikira "mamiriro acho ave akanaka," sekureva kwePakistan International Airlines (PIA).
Sekureva kwePakistan International Airlines (PIA), hurumende yeTaliban yeAfghanistan yakaraira iyo ndege, mutakuri wega wepasi rose anobhururuka nguva dzose mukati nekunze kweKabul International Airport, kudzikisa mitengo yendege kusvika kumatanho ehurumende yeAfghan yakatsigirwa neAustralia muna Nyamavhuvhu. .
Mukupindura, Pakistan International Airlines yamisa nendege dzayo dzese kuenda kuguta guru reAfghanistan, ichidaidza kupindirwa nevakuru veTaliban "zvine simba".
"Ndege dzedu kazhinji dzakatarisana nekunonoka zvisina kukodzera nekuda kwehunhu husina hunyanzvi hwevakuru vevashandi veKabul," Abdullah Hafeez Khan, mutauri wePIA akadaro.
Sekureva kwePIA, vakuru veTaliban vaiwanzo "kushora" uye pane imwe nguva "kubata" mumushandi.
Kabul nzira icharamba yakamiswa kudzamara "mamiriro acho ave akanaka," mukuru wendege akawedzera.
Pakutanga, vaTaliban vakazivisa iyo Pakistan International Airlines uye mutakuri weAfghani Kam Air kuti mashandiro avo eAfghanistan achamiswa kunze kwekunge vabvumirana kucheka mitengo yakadzikira kunze kwekusvikwa nevazhinji veAfghan kubva pakutora kweTaliban.
Bazi rezvekutakura reAfghan rakati muchirevo kuti mitengo yemugwagwa inofanira "kugadziriswa kuti ienderane nemamiriro etikiti kusati kwakunda kweIslam Emirate" kana nendege dzambomiswa.
Ndege pakati peAfghanistan nePakistan dzave dzakaganhurirwa zvakanyanya kubva pakavhurwa airport yeKabul mwedzi wapfuura zvichitevera mhirizhonga yekubviswa kwevanhu vanopfuura zviuru zana vekuMadokero neveAfghan vasina njodzi mushure mekunge maTaliban atora Afghanistan.
Nekuwedzera kwedambudziko rezvehupfumi kuri kuwedzera kunetseka nezveramangwana reAfghanistan pasi peTaliban, kwave kudiwa zvakanyanya kwekubhururuka kwendege, kwakaitwa kwakaipisisa nematambudziko akadzokororwa pamiganhu yenyika muPakistan.